Machu Picchu သို့ခရီးစဉ် ခရီးသွားသတင်း
Machu Picchu သို့သွားပါ
Mariela Carril | | လမ်းပြ, ပီရူး
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြားဆက်စပ်မှုကိုမမြင်ရသောမျက်လုံးနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် မာချူ Pichu။ တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ site ပဲ။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားသောကျောပိုးသူတိုင်းသည်တောင်များကို Machu Pichu သို့တက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကျောပိုးအိတ်ကိုသယ်ဆောင်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး တည်ရာသည်တောင်အမေရိကရှိအမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ဖြစ်သည် ပီရူးMachu Pichu သို့လည်ပတ်ရန် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး.
2 Machu Picchu သို့သွားပါ
အပျက်အယွင်းများ သူတို့ဟာမီတာ ၂၄၀၀ ကျော်ပါတယ်။ တည်ရှိနေကြသည် အဆိုပါ Cusco ဒေသတွင်း၌တည်၏, တူညီတဲ့နာမတျောမြို့ကနေ 80 ကီလိုမီတာ။ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းအဟောင်းများကဆိုသော်ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အအုံသည် XV ရာစုကအင်ကာမြို့၏နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်နိုင်သော်လည်းယနေ့ခေတ်အခမ်းအနားတည်ဆောက်ပုံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အုပ်ချုပ်သည်ဟူသောအယူအဆသည်၎င်းသည်ယခင်နှင့် ဘာသာရေးသန့်ရှင်းရာဌာနအဖြစ် officiated.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Machu Picchu, အဟောင်းတောင် ကွီချာဝါ၌၎င်းသည် ရှေးဟောင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ၏အံ့။ ခြင်း။ Machu Picchu နှင့် Huayna Picchu နှစ်ခုကြားရှိလမ်းတစ်ဝက်ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်ဆောက်ခဲ့သောareaရိယာ ၂၀၀ နီးပါးရှိသည်။
နေ့အချိန်တွင်ရာသီဥတုမှာပူပြင်းပြီးစိုထိုင်းသည်။ Isaမိုးရာသီဒေသအထူးသဖြင့်နို ၀ င်ဘာမှမတ်လကြားတွင်တောင်ဘက်ခြမ်းမှနွေရာသီသို့ရောက်ရှိလာသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်မိုးရာသီတွင်ရွာသွန်းသည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက လက်မှတ်တွေစီစဉ်, စီစဉ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်ဆိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်လပေါင်းများစွာမတိုင်မီပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရက်စွဲတစ်ခုနဲ့မင်းအလုပ်ပြုတ်ရတော့မယ်။
Machu Picchu သို့သွားမည့်လမ်းကြောင်းမှာ၎င်းဖြစ်သည် Cusco မြို့။ သူ့ဟာသူအတွက်မြို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ် ဦး ခရီးစဉ်ထိုက်တန်ပါတယ် အင်ကာအင်ပါယာ၏မြို့တော်ဖြစ်သည် နှင့် viceroyalty ၏အချိန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောမြို့။ ဟုတ်တယ် အမျိုးသားအဆင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး y ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ အလည်အပတ်သွားရန်ချာ့ချ်များရှိသည်၊ Plaza de Armas၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အင်ကာမြို့ပြ၏အကြွင်းအကျန်များသည်အောင်နိုင်ခြင်းသည်ကံကောင်းခြင်းအားဖြင့်၊
အကယ်၍ စွန့်စားမှုသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါက Machu Picchu နှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာတစ်ခုရှိသည် အင်ကာ Trail။ ဤလမ်းကြောင်းသည် Cusco မှ Machu Picchu သို့သွားသောလမ်းများ၏ကီလိုမီတာ ၈၂ တွင်စတင်သည်။ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ မင်းကလေးရက်သုံးညလမ်းလျှောက်ရတယ်မကြာခဏမိုးရာသီနှင့်အအေးခန်းများဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်နှစ် Centennial လမ်းကြောင်းအပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့အထူးဖြစ်တယ်, ဒါသိသာသည်။
မင်းလမ်းမလျှောက်ချင်ဘူးဆိုရင် နှစ်ရက်နှင့်တစ်ညသာကြာသောနောက်ထပ်တိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းရှိသည်။ သိသာတဲ့ ဤလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုတည်းကိုသာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ Inca Trail တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်လူ ၁၀ ယောက်ကျော်သောအုပ်စုများဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းလမ်းပြများရှိနေသည်။
သင်၏ရာသီဥတုမဟုတ်လျှင် မင်းရထားနဲ့သွားနိုင်တယ် ရထားလက်မှတ်ကိုတစ်လ ကြိုတင်၍ ကြိုတင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ရထားသည် Cusco မြို့နှင့်မိနစ် ၂၀ အကွာရှိ Poroy ဟုခေါ်သောဘူတာမှထွက်ခွာသွားသော်လည်းအချို့ဝန်ဆောင်မှုများမှာ Ollantaytambo မှထွက်ခွာသည်။ ဒီခရီးစဉ်က လေးနာရီ နှင့် Aguas Calientes သို့မဟုတ် Machu Picchu မြို့တွင်အဆုံးသတ်သည်။
ဤမြို့နှစ်မြို့လုံးမှတစ်ခုသည်တစ်ခုသို့ဖြစ်သည် အဆိုပါ Citadel ဖို့တက်ကိုရွေးချယ်ပါမင်းတက်နိုင်တယ် ဘတ်စ်ကား၊ မိနစ် ၂၀ အတွင်းသို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည် တက်သွားပါ တစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး peso ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါကြောင့်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်သင်လိုအပ်တာက Aguas Calientes / Machu Picchu နဲ့ရထားဘီးရဲ့ဝင်ပေါက်လက်မှတ် (နှင့်သင်ဘတ်စ်ကားနဲ့တက်သွားရင်ဘတ်စ်ကားလည်း) ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
အပျက်အယွင်းများဝင်ပေါက်သည်နံနက် ၆ နာရီမှဖြစ်သည် Machu Picchu ကို Huayna Picchu၊ တောင်၊ တောင်ပြတိုက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင်လူအနည်းငယ်သာခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ထိုရက်မှကျန်ခရီးစဉ်ကိုကြိုတင်ဝယ်ယူရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုများစွာရိုးရှင်းစေသည်။ မပါလျှင်၎င်းတို့ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အမြဲစီမံနိုင်သည် www.machupicchu.gob.pe.
သင်လည်းသိသင့်တယ် အစာမစားနိုင်ဘူး, Que ရေချိုးခန်းရှုပ်ထွေးအပြင်ဘက်ဖြစ်ကြသည် တစ်ချိန်ကအတွင်းထဲ၌သင်သည်အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်မီးခိုးများကိုမတက်နိုင်၊ မတက်နိုင်ပါ။ ဒီနေရာတွင်ကွန်ဒို၏ဘုရားကျောင်း၊ ၀ င်းဒိုးသုံးခု၏ဗိမာန်တော်၊ ကျော်ကြားသောနေ ၀ င်းဘုရားကျောင်းကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ။ အရာရာတိုင်းသည်လှပသည်။
အခုတော့ဒီနေရာကိုလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခွင့်ကောင်းယူတာဟာအပြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် Huayna Picchu သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်ကောင်းပြီ, တောင်တက်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်အဆောက်အအုံများ၊ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွင်းသို့ကျဆင်းနေသောပလက်ဖောင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ထွင်းထုထားသောကျောက်တုံးများ၊ ဆွဲထားခံထားရသောအဆောက်အအုံများ၊ အင်ကာကုလားထိုင်နှင့် Machu Picchu ၏ရှုခင်းနှင့်လှပသောရှုခင်းများရှိသည်။
Huayna Picchu ကိုနှစ်ဆိုင်းတည်းဖြင့်သာကြည့်နိုင်သည်မနက် ၇း၉ မွန်းနှင့် ၁၀ နာရီမှမွန်းတည့်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်းများသည်အန္တရာယ်များသောကြောင့်၎င်းနောက်မည်သူမျှဝင်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤတောင်ကို inkwell တွင်မထားခဲ့လိုလျှင်လက်မှတ်များကိုကြိုတင်မှာယူသောအခါတွင်ထည့်ရမည်။ လည်ပတ်ရန်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Putucusi ကိုတက်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Machu Picchu သို့မဟုတ်အခြားရှုထောင့်တစ်ခုရှိရန် Machu Picchu တောင်Huayna Picchu ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသည်။
Machu Picchu တောင်သည်ရှိတယ် 3.061 မီတာအမြင့် နှင့်လမ်း citadel သူ့ဟာသူကနေစတင်သည်။ သင် Circuit 1 ကိုလိုက်ပြီးဝင်ပေါက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်သို့ရောက်သည်။ သငျသညျအများကြီးတက်ဖို့ရှိသည်ပေမယ့်ကအရမ်းမတ်စောက်သောကြောင့်အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်မဟုတ်သောကြောင့်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ နှစ်ခုကီလိုမီတာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်သုံးနာရီကျော်တွက်ချက်ပါ။
သင်တက်သွားသည်နှင့် Huayna Picchu နှင့် Citadel တို့သည်အနိမ့်အမြင့်၌တည်ရှိပြီးလှပသောသစ်ခွများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်အထက်မှကြည့်လျှင်မင်းသည်နန်းတော်နှင့်ဗီလ်ကင်နတာမြစ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သင် Huayna Picchu သို့မသွားနိုင်လျှင်လက်မှတ်များကိုသင်မရရှိခဲ့ပါကဥပမာအားဖြင့်ဤအရာသည်သင့်အားစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။
Machu Picchu နှင့်ပတ်သက်သောလက်တွေ့အချက်အလက်:
တစ်နေ့လျှင်လူ ၄၀၀ ကိုသာလူ ၂၀၀ ကိုအုပ်စုနှစ်စု ခွဲ၍ ခွင့်ပြုသည်။
တောင်ထိပ်သို့ဝင်ခွင့်လက်မှတ်သည်၎င်း၏ပတ်လမ်းသုံးခုရှိ citadel သို့သွားရန်နှင့် Machu Picchu တောင်၏အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းသို့သွားရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏စာရွက်စာတမ်း၊ လက်မှတ်နှင့်အတူသွားရမည်၊ ဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုလုံးတွင်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံကိုမှတ်ပုံတင်တွင်တံဆိပ်ရိုက်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် circuit ၃ ခုထဲမှတစ်ခုကိုသင်လုပ်ပြီး၎င်းကိုအခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုထည့်လျှင်နေထိုင်ရန်အချိန်သည်ခြောက်နာရီဖြစ်သည်ဟုတွက်ချက်သည်။
ကျောပိုးအိတ်ငယ်တစ်ခုထက်ပိုမယူပါနှင့်။ တွန်းလှန်၊ နေကာမျက်မှန်နှင့်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးကိုသုံးပါ။
Aguas Calientes ၏ရေပူစမ်းများကိုခံစားကြည့်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ပီရူး » Machu Picchu သို့သွားပါ
အဘယ်အရာကို Merzouga တွင်ကြည့်ပါ